Buuhoodle:Faahfaahin Weerarkii Ciidamada Somaliland Ku qaadeen Buuhoodle | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > ALL DARWIISH NEWS, WARARKA	> Buuhoodle:Faahfaahin Weerarkii Ciidamada Somaliland Ku qaadeen Buuhoodle
Buuhoodle:Faahfaahin Weerarkii Ciidamada Somaliland Ku qaadeen Buuhoodle
Monday, January 16, 2012 Laaska News
Weerarkii ciidamada soomaaliland ku qaadeen Buuhoodle ayaa lagu soo waramaya inuu ahaa weerar gaadmo ah oo sii qorshaysnaa ayna fududeeyeen ciidamo deegaanka ah oo maamulkaa ka tirsan, maalmo ka horna soo galay magaalada,sida laga helay dad wargaleen ah.
Dagaalkaas Buuhoodle ayaa lagu soo waramaya in uu sababay qasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo labada dhinac ah.
Inkastoo aan wali warar rasmi ah oo sugan aan laga wadahayn qasaaraha labada dhinac, ayaa haddana waxaa la sheegay in dhinaca Buuhoodle ay jirto dhawr iyo tobon dhimasho iyo dhaawac isugu jira.
Halka dhinaca Ciidamada weerarka soo qaaday ee Soomaaliland aan war sugan laga helin haddana waxaa soo baxaya warar sheegaya in ay jiraan 3 dhimasho, dhaawac iyo waliba qaar la la’ yahay.
Waxa wararku ay ku darayaan in ay wali deegaanada ay ka taagan tahay saansaan colaadeed oo saacad walba uu dhici karo dagaal,uuna jiro gurmad iyo abaabul.
Warar kale ayaa sheegaya in ciidamada Soomaaliland ay ku noqdeen deegaanadii ay kasoo duuleen,kadib markii ay ka fashilantay weerarkii ay ku doonayeen inay kula wareegaan magaalada iyo tiknikada Buuhoodle.
Weerarkan gaadmada ah ee ay sooqaadeen ciidamada Soomaaliland ayaa noqonanaya” fadeexaddii ugu weyneyd ee ku dhacda maamulka uu madaxweynaha kayahay Mr. Siilaanyo“,sababtoo ah uma hayaan weerarkan wax qiil ah,wuxuuna caddayn uyahay inuu dagaalkii kalshaale iyo dadkii ku dhintay ee labada dhinacba ka tirsanaa ay ahayd siyaasad khaldan oo tan maanta dhacday oo kale ah,mas’uuliyadeedana ay tuurta ku qaadanayaan mas’uuliyiinta Soomaaliland.
Dhinaca kale weerarkan ayaa kusoo aaday kadib markii
Madaxweynaha Soomaaliland Mr. Siilaanyo uu sheegay:
inay kasoo horjeedaan maamulkaas cusub ee lagaga dhawaaqay Taleex isla markaana ay shirkaasi soo abaabuleen kooxo uu ku tilmaamay fidnawadayaal.
Mr. Siilaanyo oo khudbad ka hor jeediyay labada gole ee Somaliland ayaa hadaladiisa waxaa kamid ahaa :
Dawladda Soomaaliland marnaba ma ogolaan doonto inay qarankan lakala jabiyo,lakala qaybiyo iyo in lagu qadhaabto magacyo aan jirin.
Waxaan difaacaynaa midnimada iyo wadajirka Soomaaliland.
Dagaalada buuhoodle oo aannu wax ka weydiinay rag wax ka qora aadna ula socda arrimaha waqooyiga Soomaaliya ayaa noo sheegay inay u arkaan:
In dagaalkani uu yahay mid la xiriira kasoo hor jeedka ay Maamulada Soomaaliland & Puntland ay sheegeen inay kasoo horjeedaan shirka Taleex & maamul Goboleedka cusub, dagaalkani uusalka ku hayo arrimo siyaasadeed.
in ujeedadada ay ciidamada Soomaaliland tu ay ku weerareen Buuhoodle ay ahayd inay gacan ku dhigaan tignikada Buuhoodle .
inay qabtaan magaaladaa oo la filayo inay xarruun KMG ah u noqoto Maamul Goboleedka dhawaan lagaga dhawaaqay Taleex.
Waxaan ugu baaqaynaa caalamka in wax laga qabto dadka rayadka ah ee maalin walba loo gaysanayo dilka iyo barakaca.
Waxaan kaloo ugu baaqaynaa in Beesha Dhulbahante ay gudahooda iska saxaan inta ay wada hadli karaan,runtana ay isku sheegaan.
Waxaan kaloo kadigaynaa in weerar axmaqnimo ah lagu qaado ergada iyo magaalada Taleex ee uu ka socdo shir Beeleedku,weerarkaas oo ka iman kara meelo badan ayna muuqato in la fulinayo wax kasta oo lagu fashilin karo shirkaa ayna ka iman karto cid kasta oo diidan shirkaa.
Falalkaas oo keeni kara dagaal sokeeye oo lagu rogmado maamulada quraaradaha ahna ay si yar meesha uga bixi karaan.
BREAKING NEWS:Khaatumo State of Somalia
Buuhoodle:Faahfaahin Weerarkii Ciidamada Somaliland Kuqaadeen Buuhoodle
Siilaanyo Oo Ka Kadlay Mawqifkiisa Shirka Taleex
Maamul Goboleed Lagaga Dhawaaqay Shr Beeleedka Taleex
Tags: Buuhoodle, Dagaalka Buuhoodle, lasanod, Muqdisho, News, political conflict, PUNTLAND, SOMALIA, Somaliland, Soomaaliya, ssc, War in Somalia
BREAKING NEWS:Khaatumo State of Somalia ITALY:2 more shipwreck victims identified